OwezokuHlaliswa kwaBantu eKZN no-R15m kwabezikhukhula – SIVUBELAINTUTHUKO
UMNYANGO wezokuHlaliswa kwaBantu KwaZulu-Natal ophathiswe uNgqongqoshe Jomo Sibiya sewuhlinzeke ngo-R15 million kubantu abakhahlamezeke ezikhukhuleni zakamuva ezishiye kukhalwa ezifundeni ezinini zesifundazwe abantu basala dengwane kumuka imizi yabo eminye icekelwa yisiphepho.
Lo mnyango ube nomjikelezo uhambela izindawo lezo ezaba nabantu abayizisulu ngokumukelwa yimizi yabo kusukela esifundeni saseMgungundlovu, esasoThukela, ILembe nezinye izingxenye ezibhekwe wuMasipala waseThekwini.
Abantu ababalelwa kwabangu-112 bathole izindawo zesikhashana abazohlala kuzonan gesikhathi umnyango uphuthumisa ukubakhela izindlu ukuvusa lezo abebehlala kuzona kwathi abawu-150 bona bahlinzekwa ngezidingo zokwakhiwa kabusha kwemizi yabo.
UMnu Sibiya unikeze ithemba bonke abakhahlamezwe yizikhukhula ukuthi thokola themba amathemba ayewukela kuzohlangatshezwana ngokushesha nokukhala kwabo ngoba umnyango wakhe kawusiwona wezithembiso kodwa ngokwenza kubonakale. Uthe usezihambele izingxenye eziningi ezinabantu abathithwe yizikhukhula futhi ukhona umnyakazo owenziwayo ukubuyiswa kwemizi yabo. Uqinise idolo abantu baKwaZulu-Natala ebatshela ukuthi lokho abakwenzayo akuhlangene nepolitiki kodwa kusizwa wonke umuntu ngale kokubheka ukuthi uphuma kwisiphi isizinda seqembu lepolitiki.Kuzokhumuleka ukuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal siye sakshayeka kakhulu kusukela ngomhlaka 22 kuDecember nyakenye kwakuhlasela isiphepho esasihambisana namatshe okwashiya imizi eminingi icekelele phansi eMgungungundlovu nezinye izindawo. Emuva kwalokho kuhlasele imvula enamandla egcine ibhlidliza imizi kangangoba edolobheni laseMnambithi abantu base behamba ngezikebhe emigaqweni ngenxa yamanzi ayegcwele okwagcina kuphazamiseka izitolo nokusebenza kwansuku zonke kuleya ndawo. Nokho uhulumeni waKwaZulu-Natal oholwa wuNdunankulu uMnu Sihle zikalala uthi kukhona okwenziwayo ukubuyisela isimo kwesijwayelekile kulezo ndawo ezathinteka nejngobak ukhona nezamukelwa yimigwaqo.
Posted on March 24, 2022 April 3, 2022 Author Admin
TSEPO MOTLOKOA UMASIPALA wesiFunda seLembe uqinise ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi nomqashi ngenhloso yokugcina kuhanjiswa kahle intuthuko kubantu njengoba wenze ingqungquthela yezinsuku ezimbili lapho obekucobelelwana ngamasu amahle angasetshenziswa ukuthuthukisa abantu abakhele lesi sifunda. Le ngqungquthele ebingomhlaka 17-18 kuMarch KwaMaphumulo Council Chambers beyiholwa iMeya yeLembe uKhansela Thobani Shandu ehambisana nethimba elisemkhandlwini kamasipala ewuholayo okufaka usomlomo nezinye izikhulu eziphathiswe […]
TSEPO MOTLOKOA ZIHAMBELA phezulu izikhulu zikaMasipala waKwaDukuza kulandela ukuthi lo masipala uklonyeliswe ngoR1 million ngokuhamba phambili ekuhlinzekeni izakhimizi eziwakhele ngezidingo ngqangi ikakhulukazi ekuqoqweni kwemfucuza ngenhloso yokuvimba ukunganukubezeki kwemvelo. Sekungokwesibili ukuthi iminyaka ilandelana uMasipala waKwaDukuza uchonywe uphaphe legwalagwala ngokwenza kahle emphakathini nangokugcina imithetho yokuthuthwa kwemfucuza igcinwa wumphakathi kuhlanganisa nokulahlwa kukadoti ezindaweni ezigunyaziwe. Lo mcintiswano obuse-Inkosi Luthuli International […]
Kwamukelwe iKwaDukuza Resident Forum ukuphephisa abantu
Imisebenzi kaHulumeni kayikhokhelwa-Khoza